Xirmo tube tuubada re ...
Warshad si toos ah 30mm qiimaha ...
Kuleeliyaha daawaha ste daawaha ...
Sax High qabow barbaro p ...
Kaarboon kulul oo aan xabad lahayn ...
Tuubo bir ah oo aan xaddidnayn (Toddobaad aan xuduud lahayn) waa bir bir ah oo dhaadheer oo leh meel godan oo aan lahayn tollo ku wareegsan.
Sax sare High qabow barbaro sax tuubo bir aan xuduud lahayn
Codsiga: Waxaa loo adeegsaday soo saarista qaabdhismeedka farsamada, qalabka hidda, qalabka gawaarida, birta birta ah.
Fasallada tuubbada daawaha ee cadaadiska sare leh: 15 crmog, 12 cr2mog, 12 cr1movg, 12 cr2mowvtib, 10 cr9mo1vnb, SA210A1, SA210C, SA213 T11, SA213 T12, SA213 T22, SA213 T23, SA213 T91, SA213 T92, 1345 / ST45 / ST45 / crmo44, 10, 15 mo3, crmo910.
Liiska qiimaha birta kulul duuban ee qiimaha birta madow ee birta madow
Saxanka birta ah ee daawaha leh ee heerkulka sare leh wuxuu leeyahay xoog kulul kuleylka (b≥440MPa) iyo iska caabinta qiiqa, wuxuuna leeyahay iska caabin cayiman oo ku timaada daxalka hydrogen.
Dusha sare ee saxanka biraha ahama waa nadiif, wuxuu leeyahay balaastik sare, adkeyn iyo xoog farsamo, aashito, gaaska alkaliinka, xalka iyo corrosion-ka kale ee warbaahinta.Waa nooc birta daawaha ah aan si fudud u miridhsan, laakiin gabi ahaanba kama madax banaan tahay miridhku.
Bimetallic dahaaray birta-birta u adkeysaneysa saxanka birta ah waa badeecad saxan oo si gaar ah loogu isticmaalo xaaladda xirnaanshaha aagga ballaaran, waxaana lagu sameeyaa iyadoo la laalaabanayo dusha sare ee birta kaarboon ka yar ama birta daawaha ah ee hooseysa oo leh adkeysi wanaagsan iyo baaxad leh iyo isku darka lakabka dusha ka saaraya oo dhumucdiisuna gaar tahay adkaansho sarreeya iyo iska caabin wanaagsan oo duug ah.
Weelka ubaxa birta ee Corten ee beeraleyda waaweyn ee birta ah banaanka waxaa laga sameeyaa birta corten, oo loo isticmaali karo in lagu beero noocyo ubaxyo ah. Corten Steel Planter waxaa loogu talagalay qaab fudud laakiin wax ku ool ah, kaas oo caan ka ah Australia iyo dalalka Yurub. Ka sokow, caabbinta daxalka ee aadka u fiican ayaa istaagi kara imtixaanka waqtiga, dadku uma baahna inay ka walwalaan nadiifinta arrinta iyo cimrigeedaba.
Waxaan sameyn karnaa naqshad kasta oo cusub sida fikraddaada ama sawirradaada wanaagsan, waxaan ku siin karnaa CAD sawir bilaash ah.
Darbigan farshaxanka birta ah, sida caadiga ah waxaan u adeegsannaa birta u adkaysata daxalka badan sida walxaha ceyriinka ah, iyadoo lagu saleynayo qaabka uu macaamilku rabo, waxaan ku sameyn doonnaa goynta gogosha, ka dib alxanka iyo qodista, oo waxaan ku hagaajineynaa qalabka lagu diyaariyo.